IKEA kunye neQela le-Sonos ukuya kutyhila iSYMFONISK Somlomo Isakhelo | Ndisuka mac
I-IKEA kunye neqela le-Sonos ukuya kwazisa ngesakhelo sesithethi se-SYMFONISK
Kule meko inkampani ethandwayo i-Ikea ijoyina uSonos kwakhona ukubonisa isithethi ngohlobo lwesakhelo sefoto okanye ukupeyinta, ewe, into eyahluke ngokupheleleyo kunaleyo Ukudibanisa ukulunga kolu tyikityo kunye nomgangatho wesandi kwisithethi se-Sonos.
I-IKEA iphehlelele isithethi sokuqala se-SYMFONISK ze-Wi-Fi ngokusebenzisana noSonos kwi2019 Ukusukela ngoko abaphelanga kwimizamo yabo yokuphehlelela iimveliso ezintsha nezingcono. Kule meko, kwintsebenziswano yesibini phakathi kweemveliso zombini, isandi, ubugcisa kunye nokuhonjiswa kwekhaya kudityanisiwe, kuqinisa olu manyano lwenziwe phakathi kwe-IKEA kunye ne-Sonos.
Isakhelo se-SYMFONISK sinesithethi esincinci esakhelweyo seWi-Fi esihambelana ngokupheleleyo noluhlu lweSonos kunye nezinye izithethi zeWi-Fi kusapho lweSYMFONISK. Esi sithethi yingoma egqibeleleyo Isandi esihle kakhulu kunye noyilo oluhle nolula.
Isithethi esigcwele izimanga
"Isandi esijikeleze indawo esivela kwindawo ongayilindelanga." Yileyo ndlela UStjepan Begic, Umvelisi wemveliso kwi-IKEA, uchaza isandi sesi sithethi. Kulula kakhulu ukuyidibanisa ne-Wi-Fi ekhaya kwaye ikhupha isandi esicocekileyo kwikhaya lakho lonke.
Ngokomyili we-IKEA u-Andreas Fredriksson, isandisi-lizwi saphefumlelwa yile ngcamango ilandelayo: "yenza isandi esivakalayo sokuhombisa ekhaya". “Akunyanzelekanga ukuba ubeke isandisi-lizwi ngesixa esipheleleyo; ungabeka isandisi-lizwi kwigumbi ngalinye kwaye ukhethe umculo, utshilo. Umculo unamandla okutshintsha imeko yayo nayiphi na indawo, kwaye isandi esihle siyenza ngokulula, ngaphandle kokuba uyiqonde. "Awunyanzelekanga ukuba ucinge ngesandi esimnandi, sikhona"Izimvo zikaAndreas.
Izithethi ezitsha ezivela kwi-Sonos kunye ne-IKEA zinegama le-SYMFONISK kwaye zidibanise nezinye iimveliso ezinegama elifanayo. Kule meko Isakhelo ngesithethi se-WiFi sibiza amaxabiso nge- € 199 Yenziwe nge-100% ipholiyesta kunye neplastiki yeABS kwaye imilinganiselo yayo yile: 41 × 6, Ukuphakama 57cm. Emva kwexesha sinokuthenga iifreyimu ezahlukeneyo ngendlela esithanda ngayo esi sithethi sinomdla, nganye inamaxabiso ee-euro ezingama-16 kwaye konke oku kuya kufumaneka ukusukela nge-15 kaJulayi ezayo kwilizwe lethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-IKEA kunye neqela le-Sonos ukuya kwazisa ngesakhelo sesithethi se-SYMFONISK
Itreyila entsha yexesha lesibini leCentral Park ngoku iyafumaneka
IiVenkile ezingama-511 ze-Apple kwihlabathi liphela ekugqibeleni zivulekile emva kweenyanga ezili-17 zokuvalwa kwamakhefu